ACAT futhi Alat - kuyinsakavukela abadala kanye nezingane
Amathuluzi (igama eliphelele - alanine) - i-enzyme akhiqizwa isibindi futhi kuthatha iqhaza acid acid umzimba. Uma izinga legazi Alat kudlulwe, lokhu kungase kube uphawu lokuqala yokugula. Enzyme kuyimali sina elondolozwe ku kwesibindi, imisipha lwamathambo, izinso kanye muscle inhliziyo. Futhi ingasaphathwa yako serum igazi, ngoba Alat igazi izinga emelelwa inani azinakwa we ketshezi. Okwedlulele kungaba kuqubuka iyiphi zokugula, kodwa ngaso sonke isikhathi.
Uma izidumbu cell, equkethe into ngasizathu simbe ziqala ukuyeka ke igazi inqwaba iza Amathuluzi. Norm egazini serum - mayelana 0.1 kuya 0.68 mmol / ml amahora 30-40 noma amayunithi ilitha .. Okungukuthi, emzimbeni womuntu enempilo izinto eziningi ezincane kakhulu Alat samanje. Norm kwabesifazane kuyinto amayunithi kuze kufinyelele 31 ilitha, ngoba amadoda - kumayunithi 41 ilitha ngayinye. Ukwandisa Alat kungabangela izifo ezifana ne-hepatitis, ezinobuthi isibindi ukulimala, noma nomdlavuza wesibindi, isifo sokusha, ukuba umlutha wotshwala, isifo senhliziyo - a isilethikusebenza noma ukumelwa inhliziyo, ukufa imisipha lwamathambo. Futhi, ngemva ukushaqeka sina noma ukusha kungase kwandise Amathuluzi. Kuyinsakavukela ngokuvamile kudlulwe lapho massive attack inhliziyo. Futhi ukwanda sina ngesikhathi bayashintshana ekufukameleni we-hepatitis B ukutheleleka.
ACAT (igama lakhe egcwele - lutamat oxaloacetate transaminase noma aspartate) - lokuhlushwa enzyme omkhulu myocardium, isibindi, izinso kanye muscle lwamathambo. Lokhu enzyme iyasebenza ngaphezulu amadoda kunabesifazane. Uma ACAT umsebenzi egazini luyanda, lokho kungase kubonise ukuthi ukulimala emzimbeni amaseli, okungenani - kwephula kwe nemisebenzi igunya. Uma sekube ukulimala imisipha yenhliziyo, kulesi simo kukhona ukwanda okukhulu kunakho konke umsebenzi ACAT - umsebenzi wayo kungandisa kuze kube izikhathi ezingu-20. I foci ngaphezulu necrosis e myocardium, kulapho okuqukethwe enzyme egazini. Igazi kuyinsakavukela Amathuluzi izingane lingaphansi kakhulu ngokwesilinganiso kunakubantu abadala. Egazini amantombazane abaneminyaka engu-7 kuya ku-12, isibalo sabantu 13-21 oluhambisana eyodwa, futhi abafana beminyaka yobudala efanayo, lokhu wayibhinca, ephansi kanye engenhla kungaba ephakeme nge-avareji ka-amayunithi 4. Ngo intsha, izinga legazi Alat kungenzeka libe lincane uma kuqhathaniswa ukuthi izingane ezingaphansi. Ngakho, ngo-amantombazane ezineminyaka engu-13 kuya ku-17, izinga amabanga kusuka amayunithi 10 kuya 13 ilitha, kubafana okufanayo abangontanga - kusuka 10 kuya 15. Lena sibalo avareji entsheni Amathuluzi. kuyinsakavukela Its for amadoda amadala ayishintshi, futhi abesifazane abadala - kwehle ngo amayunithi 2-3 ilitha.
Futhi ALT, futhi AST kukhona enzyme - aminotransferase. Lezi enzyme ezimatasa wonke umzimba noma yimuphi umuntu. Iningi ALT esibindini, kanye ACAT - emisipheni kwemisipha - ikakhulukazi izicubu esivimba amanzi we imisipha yenhliziyo. ACAT yakhiwa cytoplasmic futhi mitochondrial isozyme isozyme. U-80% womsebenzi ACAT ewela isoenzyme cytoplasmic. Esikhathini serum igazi lazo isozymes ezimbili ngokuvamile sichazwa cytoplasmic kuphela.
AST Jwayelekile, ALT kudlulwe izilonda ahlukahlukene kwesibindi. Ikakhulukazi, izilonda oludakayo, kwezokwelapha noma anobuthi, isifo sokusha, ukushisa kwesibindi, njalonjalo. Uma kukhona anobuthi isibindi ubuthi ngenxa ukungenisa kunemithi noma amaphilisi owaphuzayo ke kuyinsakavukela ACAT Alat kudlulwe. Noma yimuphi imiphumela anobuthi kwesibindi kungaholela miphumela. Norma AST, ALT, anda ngenxa izici ukuthi ngalutho nezinkinga esibindini. Lezi zinto zibandakanya engu-usana - kuze kufinyelele ezinyangeni eziyisithupha (Ukwenyuka kwesilinganiso yalezi enzyme izingane kuvamile), ukulimala izicubu imisipha yenhliziyo, ukushisa unhlangothi, Yiqiniso lokugula fobs ezinganeni, imisipha ukuvuvukala, hemophilia, ukukhuluphala nabanye abaningi.
Norma AST, ALT, futhi bengahlonishwa emzimbeni. Lokhu kwenzeka ngenxa ukungasebenzi kwezinso, pyridoxine ukuntula, okungukuthi, Vitamin B. Kungase kahle umphumela hemodialysis okuphindaphindiwe. Kungenzeka ngokuphelele evamile ukuthi ukhulelwe understated (ephakanyiswe) ACAT noma Amathuluzi. kuyinsakavukela zayo ngesikhathi sokukhulelwa ngokuvamile i- ngenxa yokuthi uhlelo kabusha ethatha indawo umama okhulelwe.
Remedy ngoba snoring - ubuthongo obunokuthula nomndeni wakho
ESR ukuhlaziywa wegazi
Ingcindezi ephansi, isilinganiso yayo namasu ukunciphisa kanye
LPG massage: ukubuyekezwa kanye imithetho eqine
Imisipha wemikhawulo engenhla yomuntu: lokuphatselene nesakhiwo nemsebenti
Ihhotela 3 * Ihhotela Fiorana (Rimini, Italy): izithombe kanye nokubuyekeza
Aphumule saseTomsk. Nezokungcebeleka izikhungo: yokuhlala, izintengo, izithombe
Street LED Screen: Uhlolojikelele, izinhlobo, izici kanye nokubuyekeza obandayo
I-Fizalis yasolwandle - ayikho emaceleni emashalofu ethu
I izimpushana izinyo ewusizo? iresiphi Homemade
Amadivayisi we-akhawunti. Ukufakwa amamitha. imitha ukufundwa
Izakhiwo ewusizo Viburnum abomvu ukuze ukwelapha izifo, ezempilo, intsha kanye nobuhle
Indlela ukubeka ukuthungela ku Vaz-2106? Imiyalelo kanjani ukusetha ukuthungela ngoba wonke amamodeli Vaz